Malunga nathi - China Beihai Fiberglass Co., Ltd.
I-China Beihai Fiberglass Co., Ltd. ineefektri ezi-3 ezinabasebenzi abangama-2100 abanobungcali ekuveliseni iimveliso zeFiberglass e-China.Sivelisa i-E-Glass kunye ne-S-Glass fiberglass ehambayo, imisonto enqunqiweyo, ukhuko oluqhubekayo, umatshini odityanisiweyo, ilaphu le-multiaxial, umgubo kunye i-emulsion ye-strand mat, i-wallet ehambayo, i-tissue mat kunye ne-FRP (i-fiberglass eqinisiweyo yeplastiki) iimveliso ezifana nomnyango we-FRP, ibhokhwe ye-FRP, i-FRP kunye nokunye
Ngokukodwa, i-China Beihai inayo i-teknoloji yelizwi-yeklasi yobuchwepheshe obunobumba obukhulu be-E-Glass fiber kunye nemigca emi-3 yokuvelisa (ububanzi be-1600mm, 2600mm kunye ne-3200mm) yokuvelisa i-fiberglass ye-fiber strand kunye ne-120 izixhobo zokuluka zokuvelisa i-fiberglass ephothiweyo.
Imveliso yonyaka ye-fiberglass roving ifikelela kwi-380,000 yeetoni kunye ne-fiberglass eqhotyoshelweyo i-strand mat ye-66,000 yeetoni kunye ne-fiberglass ephothiweyo yeetoni ezingama-33,000.
1.3 iifektri ezinabasebenzi abangama-2100 abakhethekileyo ekuveliseni iimveliso zeglasi yeglasi.
2.Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava kunye neendidi zemveliso ezingaphezulu kwe-18 ezinokubonelela ngeenkonzo zokuma.
Imigca yemveliso ye-3.3 kunye nezixhobo zokuluka eziyi-120 ezinika imveliso ezinzileyo ukuze sikwazi ukuqinisekisa ngexesha kunye nokuziswa okukhawulezayo.
Zonke iimveliso zethu ezinemigangatho esemgangathweni yamazwe aphesheya, iimveliso zithunyelwa kuMazantsi mpuma eAsia, eMid East, eMpuma Yurophu, eMzantsi Melika, eMntla Melika nakwezinye iimarike ezinkulu zaphesheya.
Iqela le-5.R & D kunye neetekhnoloji eziphambili ukuze zibonelele ngokufanelekileyo kuzo zonke iintlobo zeemveliso ezisemgangathweni kunye neemveliso ezenziwe ngokwezifiso.
6.Sinamasebe akhethekileyo asemgangathweni ukuqinisekisa ukuba akukho ngxaki esemgangathweni phambi kokuziswa.
7. Ukuthunyelwa kwelinye ilizwe phantse kubeyiminyaka elishumi yembali, kuqokelelwe amava atyebileyo kwaye aqhelene nesatifikethi samaxwebhu kunye nenkqubo yokuthumela kwelinye ilizwe ekubonelela ngeenkonzo zobungcali bokuthumela ngaphandle.
Ngokuhambelana nemfuno yabathengi yeendlela zokuhlawula eziguqukayo kunye ezahlukeneyo. Ezifana ne-L / C, T / T, umanyano lwaseNtshona, i-paypal, njl.
I-9.24 yeyure kwi-Intanethi yokuthengisa kwangaphambili kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa ukubonelela ngempendulo yobungcali kunye nexesha elifanelekileyo.